माछापुछ्रे बैंकले एकै पटक थप १० शाखा कार्यालयको सुरुवात गरेको छ । खोटाङको हलेसी शाखाको उद्घाटन बैंकका पुूर्वअध्यक्ष डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, बैंकका सञ्चालक राममान श्रेष्ठ र नगरका मेयर इभर राईले संयुक्त रूपमा गरे भने धनुुषाको गणेशमान चारनाथ शाखाको उद्घाटन बैंकका पूर्वअध्यक्ष डा. महतो, बैंकका सञ्चालक राममान श्रेष्ठ तथा नगरका मेयर रामबाबुु यादवले संयुक्त रूपमा गरे । त्यसैगरी झापाको बाह्रदशी शाखाको उद्घाटन भने बैंकका सञ्चालक गोपी कृष्ण न्यौपानेले गरे । साथै, बैंकले मोरङको जहदा, रौतहटको वृन्दावन, चितवनको कालिका र इच्छाकामना, कास्कीको मादी, अछामको पञ्चदेवल विनायक र मुुगुुको खत्याडमा समेत शाखाको स्थापना गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंकले वाणिज्य बैंकको उपस्थिति नरहेका १० गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । नयाँ शाखामार्फत बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई कर्जा, निक्षेपलगायतका सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै, हलेसी र गणेशमान चारनाथ शाखामा २४ सै घण्टा रकम झिक्न सकिने आफ्नै एटीएमको सुबिधासमेत उपलब्ध गराएको बताएको छ ।